IYunithi yesitudiyo soLwandle - I-Airbnb
IYunithi yesitudiyo soLwandle
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSada
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-28 Jan.
Le ndawo isanda kwakhiwa yegumbi elinye ibekwe kwindawo efihlakeleyo ecaleni kwe-Dreamview Marina kunye neGlamping indawo enomoya othatha ukutshona kwelanga kunye neembono zolwandle. Ilungele iindwendwe ezithanda ulwandle. Iyinxalenye yeDreamview Villas eyindawo eyaziwayo eRakiraki, eFiji. Iindwendwe zamkelekile ukusebenzisa iVillas Swimming Pool.
Ukujikeleza kokhuseleko ebusuku.
Iintsuku eziyi-7 e Volivoli
Jan 29, 2023 - Feb 5, 2023
4.64 · Izimvo eziyi-14
Ungayonwabela ichibi kunye nokutya kwi-Dreamview Villas emalunga ne-500m ukusuka kwindawo yokuhlala. Wananavu Resort yi 5 imizuzu ukuhamba ecaleni waterfront. Wamkelekile ukuba uhambe kwaye unyuke iinduli kwindawo yaseVolivoli.
Umbuki zindwendwe ngu- Sada
Iindwendwe zineeyure ezingama-24 zokufikelela kuMphathi kunye nabasebenzi ngalo naluphi na uncedo.